Dowladda Soomaaliya oo dalka ka ceyrisay masuul ka tirsan Hay'ad caalami ah | Keydmedia
Dowladda Soomaaliya oo dalka ka ceyrisay masuul ka tirsan Hay’ad caalami ah
Dowladda Soomaaliya ayaa dalka ka ceyrisay Agaasimahii Hay'adda Care, kadib markii uu faraha la galay arrimo siyaasadeed sida ay sheegtay Wasaaradda waxbarashada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu soo saaray amar ah in uu dalka ka baxo Agaasimihii Hay'adda CARE Imaan Cabdullaahi oo lagu eedeeyay in uu ku kacay arrimo fara gelin ah.
Sidoo kale qoraalka ka soo baxay Wasaaradda ayaa lagu sheegay in Agaasime Iimaan Cabdullaahi uu iska hor keenay dowladda iyo dowlad goboleedyada, kadib markii uu faraha la galay arrimo siyaasadeed oo gudaha ah.
“Kaddib eedaymo badan oo uu Iimaan C/llaahi lugaha la galay Wasaaradda Waxbarashadu wax wadashaqayn ah lama sii yeelan doonto Xafiiska agaasimaha Hay’adda Care Soomaaliya” ayuu yiri Wasiir Goodax oo qoraalkiisa loo diray madaxda Hay’adda Care ee caalamka.
Agaasimaha la cayriyay ee Hay’adda CARE Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inuu kalsooni daro dhex dhigay deeq-bixiyayaasha iyo dawladda dhexe gaar ahaan dhanka Waxbarashada, taas keentay in Wasiir Goodax Barre uu ka caroodo, kadibna warqad ceyrin ah u jaro.
“Waxaa intaas dheer intii aad ahayd agaasimaha CARE waxaad sameysay olole aad ku wiiqeyso horumarka qeybta waxbarashada adiga oo qas ka dhex abuuraya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhigaggeeda, oo ay ku jiraan deeq bixiyayaasha iyo saaxibadeeda waxbarashada. Waxaad isku dayday inaad waxyeeleyso xiriirka ay dowladda la leedahay deeq bixiyayaasha iyo saaxiibadeeda,” ayuu yiri Goodax.
Hay'adda CARE ayaa sheegtay in ay soo gaartay warqadda lagu ceyriyay Agaasimaheeda Soomaaliya, iyadoona sheegtay in ku howlantahay xalinta arintaan.